काठमाडौँ– नेपालमा आजदेखि कोभिड–१९ को दोस्रो मात्राको खोप लगाइँदै छ । गत माघ १४ देखि फागुन १० गतेसम्म कोभिड–१९ को पहिलो मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई दोस्रो मात्राको खोप लगाउन लागिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिए ।
धरहरा सर्वसाधारणका लागि आगामी माघमा मात्रै खुला हुने
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख ११ गते २२ तले नयाँ धरहरा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । उद्घाटन भए पनि आमनागरिकका लागि झण्डै एक वर्षपछि मात्र धरहरा खुला हुनेछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार धरहरा निर्माणको काम ९८ प्रतिशत पूरा भएको छ ।
पाल्पामा जीप दुर्घटना, ७ जना घाइते
भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री सिंह कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित
पाल्पा- पाल्पाको निस्दीमा जीप दुर्घटना हुँदा ७ जना घाइते भएका छन् । त्यसमध्ये दुई जनाको
सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ तालिममा नेपालसहित ११ देशका सैनिक अधिकृत सहभागी (फोटोफिचर)
अविश्वासको प्रस्ताव छल्न संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको होइन : मन्त्री गुरुङ
कांग्रेस महाधिवेशनको आन्तरिक कार्यतालिका हेरफेर
वर्तमान राजनीतिक अन्योलमा कांग्रेस जिम्मेवार : प्रधानमन्त्री ओली (प्रतिवेदनसहित)
लुम्बिनीमा मन्त्री बनेकालाई कार्यभार सम्हाल्न नपाउँदै राजीनाको अल्टिमेटम
गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन १३ बैशाखमा
बामा (एएफपी)- मालीमा द्वन्द्वरत दुइ पक्षबीच झडप हुँदा कम्तीमा ४० जनाको मृत्यु भएको छ । लामो समयदेखि द्वन्द्वरत दुइ पक्ष जिहादी र परम्परागत शिकारीहरुका बीचमा झडप हुँदा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । देशको मध्यभागमा पर्ने मोप्ती क्षेत्रमा घटना भएको सरकारी...
हवाई भाडा बढ्यो, कुन गन्तव्यमा कति ?
मङ्गलबार चैते दशैँ मनाइँदै
सेनाले नाइट भिजन हेलिप्याड निर्माण गर्दै
काठमाडौँ – हवाइ इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि वायु सेवा प्रदायकहरूले पनि हवाइ भाडा बढाउने भएका छन् । इन्धनको मूल्य अनुसार फ्युल सरचार्ज कायम हुने व्यवस्था
कोरोना संक्रमण बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको ९ बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्ररुपमा फैलिएपछि जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित सेवा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र
ल्यान्डमर्क फुड्समा कुमारी बैंकको कार्डबाट भुक्तानी गर्दा छुट पाइने
काठमाडौँ– कुमारी बैंक लिमिटेड र जावलाखेल स्थित ल्यान्डमर्क फुड्सबीच सहकार्यको सम्झौता भएको छ । कुमारी बैंकका डेबिट/क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी
काठमाडौँ- आईपीएल टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्सले दोस्रो जित निकालेको छ । मुम्बईमा सोमबार राति राजस्थान रोयल्सलाई ४५ रनले पराजित गर्दै चेन्नईले दोस्रो जित निकालेको
एमाले निकट खेलकुद महासंघले राष्ट्रिय भेला गर्दै
काठमाडौँ – नेकपा एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासंघको राष्ट्रिय भेला मंगलबार काठमाडौँमा हुने भएको छ । महासंघले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार
काठमाडौँ – कुशल भुर्तेलको अर्धशतकको मद्दतमा नेपालले त्रिकोणात्मक टी–ट्वान्टी क्रिकेट सिरिजमा मलेसियालाई ९ विकेटले पराजित गरेको छ । त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय
चितवन- जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गरेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको
सिरहा – बोक्सीको आरोपमा महिलालाई कुटपिट गरी यातना दिने युवक पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार औरही गाउँपालिका–५ की ५० वर्षीय हिरादेवी साहलाई बोक्सीको आरोपमा
काठमाडौँ– नेपालमा आजदेखि कोभिड–१९ को दोस्रो मात्राको खोप लगाइँदै छ । गत माघ १४ देखि फागुन १० गतेसम्म कोभिड–१९ को पहिलो मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई दोस्रो
आज २०७८ वैशाख ७ गते मंगलबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन